Sida loo Beddelaan MP4 in wmv on Mac / Win (Windows 8 ka mid ah)
Wmv waa qaab Windows Media Video. Haddii aadan ka ciyaari kara MP4 on PC ama mobile telefoonada, aad u bedeli karaan faylasha MP4 in files wmv u waafaqid qalab wmv ku salaysan oo ku habboon video tafatirka. Maqaalkani waxa uu ku talin doonaa MP4 xirfadle in Converter wmv leh ugu fiican ee wax soo saarka video tayada iyo xawaaraha ugu dhaqsiyaha badan diinta.
Qeybta 1: Best MP4 in Converter wmv
Qeybta 2: MP4 Free in wmv Converter
Qeybta 3: MP4 Online in wmv Converter
Qeybta 1: Best MP4 in wmv Converter for Windows / Mac (El Capitan ka mid ah)
Beddelaan MP4 in wmv, MKV, AVI, MOV, iyo in ka badan oo aan khasaaraha tayo leh.
Beddelaan MP4 qalabka kala duwan oo ay ku jirto telefoonada Android iyo Apple, qalabka ciyaarta.
Videos Edit sida video tafatirka qalab xirfadle by falinjeeerka, lana siii, isagoo intaa ku daray Cinwaan, iwm
Guba video inay DVD oo aan xad laheyn oo xawaare sare.
Sida loo badalo MP4 in wmv
Maqaalkani waxa aad barayaa sida loo badalo files MP4 in files wmv in Windows (Windows 10 ka mid ah) talaabo talaabo ah. Haddii aad rabto in aad ogaato sida loo badalo MP4 in wmv u Mac (Yosemite ka mid ah), fadlan riix halkan .
Tallaabada 1 Import videos in MP4 in ay Converter wmv
Orod Converter this, guji "Add Files" iyo dar videos MP4 aad rabto in aad si loogu badalo, ama si toos ah jiidi & iyaga iska barnaamijka ka. Video Tani MP4 in Wmv Video Converter u bedeli karaan oo aan khasaaro u dhexeeya tayada MP4, wmv, VOB, MKV, 3GP, FLV, iwm
Tallaabada 2 Calan qaabab wax soo saarka
Riix qaab icon iyo dooro wmv sida qaab wax soo saarka. Oo weliba, aad samayn karto qaar ka mid ah goobaha kale, sida video encoder, xallinta iwm oo yeeshaan, kaliya riix "Dejinta" button.
Fiiro gaar ah: 1. Haddii aad rabto in aad u astaysto video, fadlan guji "Edit". Ka dibna waxaad u astaysto video ah leh hawlaha tafatirka awood leh.
2. Haddii aad diinta MP4 qalabka sida Blackberry, Zune iwm, waxaa la soo jeediyay in aad dooratay ee optimizations saxda ah ee in ka mid ah liiska qalabka. Dabcan, aad sameyn kartaa profile wax soo saarka ee "Qaabka Output" furmo suuqa keligaa.)
Tallaabada 3 Start si loogu badalo MP4
Guji "Beddelaan" dambeyntii, iyo wadahadallo toos ah la dhamaystiri doono. Waxaad ka heli kartaa la gediyay videos adigoo gujinaya "Open Folder".
Tani MP4 in Wmv Video Converter (Windows 8 taageeray) badalo karo iyada oo aan khasaaro u dhexeeya tayada MP4, wmv, VOB, MKV, 3GP, FLV, iwm Haddii aad rabto in aad si loogu badalo MP4 in qaab kale , tallaabooyinka la mid yihiin kuwa kor ku xusan.
Sida loo Beddelaan MP4 in wmv for Windows (Windows 10 ka mid ah)
# 1. Free Video Converter: Wondershare MP4 Free in wmv Converter
Tani MP4 Free in wmv Converter waa mid aad u fudud in ay isticmaalaan. Uma baahnid in aad xariif farsamo kasta oo ogaan doonaa sida ay u badalaan MP4 in wmv in habka deg deg ah.
Pro: 100% xor ah
1. Waxaad u isticmaali kartaa si loogu badalo wax caadi ah videos, laakiin ma waxaad isticmaali kartaa si loogu badalo in ay 3D iyo HD videos.
2. Ma jiraan wax presets filaayo in aad si toos ah loogu badalo qalabka.
3. Gubasho video inay DVD aan la taageeray.
Haddii aad raadinayso a video Converter xirfadeed iyo daryeel badan oo ku saabsan tayada video wax soo saarka, aad si fiican isku dayi lahaa Video Converter Ultimate.
Sida loo Beddelaan MP4 in Windows Movie Kan sameeyey,
> Resource > Beddelaan > Sida loo Beddelaan MP4 in wmv fudud oo dhakhso ah ee Mac / Win (Windows 10 ka mid ah)